भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीस मिनेटसम्म सवारी रोकिने | Rajmarga
भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीस मिनेटसम्म सवारी रोकिने
काठमाडौँ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सवारीमा २० मीनेटसम्म सवारी रोकिने भएको छ ।
दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज बिहान जनकपुर हुँदै दिउँसो १.३० बजे काठमाडौँ आउन लाग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सुरक्षाका लागि १० देखि २० मिनेटसम्म सवारी रोकिने भएको हो ।
Previous post: सर्पको जिब्रो बिचमा किन चिरिएको हुन्छ ? महाभारतमा यसो भनिएको छ
Next post: चलन पनि कस्ताकस्ता ! कतै उज्यालोमा प्रतिबन्ध त कतै विवाहअघि सेक्स अनिवार्य